मधेस छुट्टै देस भन्दै यसरि कुर्लिए सी के राउत, प्रहरी मुकदर्शक बन्यो (फोटो फिचर सहित ) | Hulaki Online
सिरहा, माघ-६। स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा. राउतले मधेस देशका लागि जनमत संग्रह गराउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । सिरहाको लहानमा आयोजित १० औं बलिदानी दिवसलाई सम्बोधन गर्दै डा. राउतले १० वर्ष अगाडी मधेसका लागि ज्यानको आहुती दिएका सहिद रमेश महतोको एक बुँद रगत पनि खेर जान नदिने उद्घोष गरे । ‘मधेसका सयौ यूवा अधिकारका लागि सहिद भए तर १० बर्षमा पनि के पायो मधेसले भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘अब जनमत संग्रहमार्फत अधिकार लिन्छौं ।’
डा. राउतले मधेसकै दानापानी खाएर शासक बर्गले उल्टै मधेसमाथि शासन तथा दमन गरिरहेको धारणा राख्दै अब कुनै शासक बर्गको हुकुम्मत मधेसमा चल्न नदिने बताए । उनले भने, ‘मधेस देश बनेपछि मात्र शासन सत्ता हामी मधेसीको हातमा आउँछ । मधेसी यूवा रोजगार पाउँछ । कोही सेना बन्छ त कोही अधिकृत ।’
उनले मधेसमा प्राकृतिक स्रोत साधन प्रशस्त भएपनि पहाडी शासकले हामी मधेसीलाई उपयोग गर्नबाट रोक लगाएको बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘कोशीमा पानी छ तर हामीलाई किन प्रयोग गर्न दिएको छैन् ? मधेसमा बनजंगल छ तर हामीलाई किन घर बनाउन काठ दिदैन ? यो कस्तो विभेद ?’
प्रहरीलाई झुक्याएर लहान आइपुगेका राउत सहिद पार्क पुगेर सहिद रमेश महतो लगायतका पाँच सहिदलाई माल्यार्पण गरेका छन् । उनले सहिद पार्क आउनु अगाडी करिब राउतका १० हजार समर्थक उपस्थिति भइसकेको थियो । झन झन समर्थक बढ्न थालेपछि एउटा गाडीबाट अचानक डा. राउत ओर्लेका थिए । त्यसपछि सहिदलाई माल्यार्पण गरी पशुपति उच्च मावि पुगेर कोणसभा गरेका छन् ।
उपेन्द्र र महेन्द्र डराए
करिब विहान साढे ११ बजे रमेश महतो लगायतका सहिदलाई संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादबले माल्यार्पण गरे । माल्यार्पणपछि उपेन्द्र यादबले लहानस्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पतालमा पुगेर विरामीलाई फलफूल वितरण गरे । यता महेन्द्रराय यादब सहिद पार्क नजिकै राजमार्गकै छउमा बनाएको स्टेज पुगेर कोणसभा गर्न थाले ।
उपेन्द्र फलफूल वितरणपछि लहानमा कोणसभा नगरी गढिया पुगे । महेन्द्रले सम्बोधन गर्न नपाउँदै डा.राउतका हजारौं नेता तथा कार्यकर्ता सहिद पार्क अगाडी आएर प्रदर्शन गर्न थाले । महेन्द्र राय यादबले गरेको कोणसभा सुनसान भयो । हतार हतार उनले सम्बोधन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरे ।
महेन्द्र राय यादबपनि हिडे लगत्तै डा. राउत अचानक एउटा गाडीबाट पार्क अगाडी ओर्लिए । सुरक्षाकर्मी पनि आश्चर्यमा परे ।
सुरक्षाकर्मीहरुलाई राजमार्गमा गाडी कटाउन हम्मेहम्मे पर्यो । सधैं ट्राफिक मात्र देखिने राजमार्गमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसमेत सडक व्यवस्थापनमा लाग्यो । डा. राउतका कार्यकर्ताको जमात बढ्दै गयो । एक छिनमै करिब १० हजारभन्दा अधिक नेता तथा कार्यकर्ता भेला भए । त्यसपछि डा. राउतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न आँट पुगेन् । डा. राउत माल्यार्पण गरेर हजारौं कार्यकर्ताको सुरक्षा घेराबीच कार्यक्रम स्थल पशुपति आदर्श उच्च मावि पुगेका थिए ।
उपेन्द्र यादबलाई पहिल्यै थाहा थियो कि डा. राउत आएपछि आफ्नो सभा खल्लो हुन्छ । त्यही कारण उनी लहानमा कार्यक्रम नगरी गढीया पुगेर कार्यक्रम गरेको स्रोतले जनायो । स्रोतका अनुसार उपेन्द्र यादबको कोणसभामा एक हजार पनि मधेसी जनता थिएनन् । मधेसवादी दलले मधेसीलाई धोका दिएको र पटक पटक सत्तामा पुगेपनि आफ्नो स्वार्थ मात्र पुरा गरेका कारण उनीहरुबाट मधेसी जनता दिक्क भएको बुद्धिजिवीहरु बताउँछन् ।
सुरक्षाकर्मीलाई यसरी झुक्याए डा. राउतले
डा. राउतलाई लहान नै पुग्न नदिने र पुगेपनि सहिदलाई माल्यार्पण गर्ने वित्तिकै पक्राउ गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख तथा एसपीलाई गृह मन्त्रालयले आदेश दिएको थियो । तर प्रहरीले डा. राउत लहान आएर कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा पनि पक्राउ गर्न सकेनन् । डा. राउतले पहिल्यै मधेसी जनतालाई आह्वान गरेका थिए चलु लहान, भरु लहान (चलौ लहान, भरौं लहान) नाराका साथ । त्यसैले करिब १० हजार भन्दा बढी कार्यकर्ता तथा समर्थक बलिदानी दिवस मनाउन लहान आए । र डा. राउतले सहजै सहिद दिवस मनाउन पाए ।
स्रोतका अनुसार डा. राउत मंगलवार राति अन्दाजी ११ बजे नै लहान आएर केन्द्रिय सदस्य विष्णु चौधरीको घरमा बसेका थिए । तर कसैले यो कुरा थाहा पाएनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्जनौं घुमुवा डा. राउतको गतिविधि थाहा पाउन परिचालन गरेका थिए । स्रोतका अनुसार जनकपुरका एसपीले सिरहाका एसपीलाई आज विहान पनि डा. राउत जनकपुरमै रहेको जानकारी गराएका थिए । प्रहरीको सोच थियो– सिरहा प्रवेश गर्ने वित्तिकै समात्ने । तर जनकपुर प्रहरीका कारण सिरहा प्रहरी पनि झुकियो ।
सिरहा प्रहरीले आज दिउँसो १२ बजेसम्म डा. राउतलाई सिरहा छिर्ने वित्तिकै पक्राउ गर्न मिर्चैया प्रहरीलाई धनुषा र सिरहाको सिमानामा पठाएका थिए । तर जब डा. राउत लहानस्थित सहिद पार्क अगाडी आइपुग्यो अनी मात्र नेपाल र सशस्त्र प्रहरीले थाहा पायो । अनी सिमानामा पठाएका मिर्चैया प्रहरीलाई फिर्ता बोलाएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।